Facebook ရဲ့အားနည်းချက်တွေ Gadget သတင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိသန်းပေါင်းများစွာသောလူများကိုအင်တာနက်ကိုဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းအဖြစ်အသုံးပြုကြပြီးလူမှုကွန်ယက်များက၎င်းကိုမလွတ်မြောက်စေနိုင်ပါ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်အများဆုံးမှတ်ပုံတင်ထားသောအသုံးပြုသူများနှင့်တစ်ခုဖြစ်သည် Facebook က၊ သင်သိသည့်အတိုင်းအခြားအသုံးအဆောင်များကြားတွင်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများ၊ စကားပြောခြင်း၊ ဓါတ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများ၊ ဂိမ်းများမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဆက်အသွယ်များနှင့်ဆက်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။ အရင်လူမှုရေးကွန်ရက်ရဲ့အားသာချက်များအကြောင်းအရင်ပြောခဲ့ဖူးသော်လည်း၊ အရာအားလုံးမှာဖေ့စ်ဘွတ်ဟာအများအားဖြင့်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိဘူး၊ အားနည်းချက်အချို့လည်းရှိသည်။
ပထမ ဦး စွာလူအများတိုးပွားလာလျက်ရှိသည်ကိုဖော်ပြသင့်သည် အင်တာနက်စွဲ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဥပမာအားဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံတွင်အင်တာနက်စွဲသူများအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစင်တာများရှိပြီးဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ၊ ဖေ့စ်ဘုတ်သည်၎င်းကိုမလွတ်မြောက်စေဘဲလူများစွာသည်ဤလူမှုအသိုင်းအ ၀ ိုင်းနှင့်နာရီပေါင်းများစွာအချိန်ကုန်ခံကြသဖြင့်သူတို့၏တကယ့်ကမ္ဘာလောကရှိသူတို့၏ဆက်ဆံရေးကိုလျစ်လျူရှုခဲ့သည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်နောက်ထပ်ပြproblemနာတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့မသိသောလူများနှင့်အဆက်အသွယ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်မရေမတွက်နိုင်သောကာလများ၊ ကလေးများသည်ရာဇ ၀ တ်သားများမှပြန်ပေးဆွဲခံရသည် Facebook ကိုအတုအယောင်အတုများမှတဆင့်သူတို့၏အမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ထားသည်။
နောက်ထပ်အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်ထို့ကြောင့် privacy မရှိခြင်း ကောင်းပြီ၊ သင်သိသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပရိုဖိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သောအချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့ကိုလျစ်လျူရှုထားနိုင်သော်လည်းဤလူမှုကွန်ယက်အတွင်းရှိ privacy option ကိုပြုပြင်ရန်သင်ယူခြင်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » လူမှုရေးကွန်ယက် » Facebook ရဲ့အားနည်းချက်များ
Flavia rosalinda ဟုသူကပြောသည်
Ami က maliciousoooooooooooooooo လို့ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ကောင်းတာကငါသူငယ်ချင်းတွေနဲ့လေ့လာပြီး၊ ငါရည်းစားနဲ့စကားပြောနိုင်ပြီးဆိုးတာကကိုယ်အကြိုက်ဆုံးရူပဗေဒဓာတုဗေဒ၊ ဇီဝဗေဒ၊ သင်္ချာစတဲ့ဘာသာရပ်တွေလေ့လာဖို့အချိန်မရှိဘူး။ စပိန်ဘာသာ၊ သိပ္ပံပညာ၊ လူမှုရေးနှင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်ခြင်း၊ ဒါပေမယ့် Facebook ကိုလုပ်တဲ့သူကအရမ်းကြောက်စရာကောင်းတယ်၊ ကျွန်မရဲ့ရည်းစားလည်းသူနဲ့တူတယ်၊ သူကကျွန်တော်ကိုသူကမုန်းတီးပုံရတယ်၊ ပြီးတော့သူလည်းငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုပိတ်လိုက်တယ်။
Flavia rosalinda အားပြန်ပြောပါ
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် ... လုံလောက်ပြီနော် ?? မျက်နှာသည်သင်မသိသောလူများသည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း၊ သင့်အားစစ်ဆေးသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘ ၀ သို့ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံခြင်းမရှိပဲရင်ဆိုင်ရခြင်းဖြစ်သည်။ သူစိမ်းများအားဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်တို့ပင်မသိ၊ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဓာတ်ပုံများကိုသူတို့လိုချင်သည့်အချိန်တွင်သူတို့ရှာဖွေကြသည်၊ သူတို့လိုချင်သည့်နေရာတိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကျော်ကြားသောဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုမရှိပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့? သူတို့ကမင်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရောက်သွားကြပြီးအဲဒါကကျွန်မကိုမပျော်ဘူး။ ဒါကထူးဆန်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး၊ မင်းရဲ့ဘဝ၊ မင်းရဲ့မိသားစုဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့အန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်၊
အလှဆုံး Faviolita! ဟုသူကပြောသည်
Facebook နှင့် ပတ်သက်၍ များသောအားဖြင့်ပြောသောအရာများကိုကြည့်ပါ - Mark Zuckerberg တီထွင်ခဲ့သောအခမဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာ ၀ ဘ်ဆိုဒ်။ ၎င်းသည်မူလကဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူဖြစ်သော်လည်းယခုလက်ရှိတွင်အီးမေးလ်အကောင့်ရှိသူမည်သူမဆိုဖွင့်နိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်လူမှုရေးကွန်ယက်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောသူတို့၏ပညာရေးအခြေအနေ၊ အလုပ်အကိုင်နေရာသို့မဟုတ်ပထဝီအနေအထားအရပါ ၀ င်နိုင်သည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်အခြားစာမျက်နှာများသည်အသုံးပြုသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကျန်ရှိနေသောကြောင့်အန္တရာယ်ရှိလာသည်။ အီလက်ထရွန်နစ်အကောင့်ရှိသူမည်သူမဆိုသူတို့၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်ဟုဆိုသည်မှာသင်သည်သင်၏ကလေးနှင့်မည်သူနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံသည်ကိုစဉ်းစားရန်လာသလားမုဒိမ်းကျင့်သူတစ် ဦး ဦး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ဤစာမျက်နှာတွင်ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုသင် upload ပြုလုပ်သောအခါအကောင့်ရှိသူတိုင်းကြည့်ရှုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ထိုစာမျက်နှာပေါ်တွင်သင်၏အချက်အလက်များကိုသင်ထည့်သောအခါသင်သည်ထပ်မံ ဖျက်၍ မရနိုင်သောကြောင့်သင်၏အကောင့်ကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။ ဤအချက်အလက်များကိုမှတ်ပုံတင်လိမ့်မည်
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကငါတို့အတွက် monotony တစ်ခုဖြစ်လာပြီးသူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘ ၀ မှာ "Facebook ကိုဝင်" ပြီးပြီ
ကျွန်ုပ်ထင်မြင်မိသည်မှာလူငယ်များအနေဖြင့်၎င်းသည်ကြီးမားသောပျက်စီးမှုကိုသတိပြုမိရန်လိုသော်လည်း၎င်းကိုဖြစ်ပေါ်စေမည့်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများကိုကျွန်ုပ်တို့သိသော်လည်း၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့မမြင်လိုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာကိုသိလျှင် "ကောင်းကင်နှင့်ဖေ့စ်ဘွတ်အကြားဝှက်ထားသည့်အရာမရှိ" ဟူသောစကားစုကိုကြားရလေ့ရှိသည်၊ ထိုတွင်စာမျက်နှာတစ်ခုဖန်တီးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ privacy ကိုဖော်ပြသည်။
ငါဒီစာမျက်နှာကိုသဘောမတူဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အမှန်တရားအချိန်ကာလကသူငယ်ချင်းတွေအများကြီးနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးသူတို့ဆီကအချက်အလက်အချို့ကိုကြည့်ရတာစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လာတယ်။ လူငယ်အများစုအနေဖြင့်အရာဝတ္ထုများ၏အန္တရာယ်ကိုတစ်ခါမျှမမြင်ဖူးသောကြောင့်မဟုတ်ပါ။
ယာကုပ် ၄း၄ ၌ဘုရားသခင်၏စကားတော်က - လောကနှင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့သူသည်မိမိကိုယ်ကိုဘုရားသခင်၏ရန်သူဟုသတ်မှတ်သည်။ လောကီအရာများတွင်အချိန်ယူခြင်းသည်ဘုရားသခင်နှင့်ဝေးကွာသွားသည်မဟုတ်လော။
ဒီလူမှုရေးကွန်ယက်အမျိုးအစားတော်တော်များများဟာသူတို့လုပ်သမျှအားလုံးဟာသင်လက်ခံတဲ့လူတွေနဲ့မှားယွင်းတဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကိုဖန်တီးပေးတာပါ၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုမသိဘဲနဲ့ကြာမြင့်စွာကတည်းကရိုးရိုးသားသားခင်မင်ရင်းနှီးမှုကအချိန်ကြာမြင့်စွာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ် များစွာသောအရာတို့ကိုရေတွက်ပြီးယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိသော်လည်းသင်မည်သူနှင့်စကားပြောနေသည်ကိုသင်မသိပါ၊ ၎င်းသည်သင်မည်သူစကားပြောနေသည်ကိုသင်အမှန်တကယ်မသိသောအားနည်းချက်များအနက်မှတစ်ခုအဖြစ်လည်းယူနိုင်သည်။
Faviolita ကိုအလှပဆုံး Reply!
Valentine Romero ဟုသူကပြောသည်
ငါထင်တာကအိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တဲ့အရာ၊ သန်းနဲ့ချီတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုအဓမ္မပြုကျင့်မှုနဲ့လူတွေကိုလုယက်တာတွေကြောင့်သူတို့ကိုငါဖယ်ထုတ်ပစ်စေချင်တယ်၊ ဒါကမမျှတဘူးလို့မထင်ဘူး
VALENTINA ROMERO သို့အကြောင်းပြန်ပါ
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်အတွက်အရမ်းဆိုးပုံရသည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သည်လူတို့၏လျှို့ဝှက်စိတ်ခံစားမှု၏အင်ဂျင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့တွင်ဆက်သွယ်မှုမရှိခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤနည်းဖြင့်ကောင်းမွန်သောဆက်သွယ်ရေးရှိခြင်းကိုယုံကြည်သည်၊ နေ့စဉ်မိုးရွာရွာနှင့်ဖြစ်စေ၊ အပြင်၌ဖြစ်စေထွက်လှည့်လည်ကြည့်ရှုခြင်း၊ ထိုသူ၏အလှပဆုံးအရာများသည်ထိုတွင်ရှိနေရခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီဟာကတကယ့်အချိန်ကလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သဘာဝလား၊ စိတ်ခံစားမှုတွေပြည့်နှက်နေတဲ့အာကာသထဲမှာနေတယ်။ တိုတိုပြောရရင်၊ ငါကစစ်မှန်တဲ့ဘဝ၊ လူသားတွေအကြားတည်ရှိတဲ့စင်ကြယ်တဲ့အရာ၊ မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုသည်ကျွန်ုပ်အသက်ရှင်သောအဖြစ်မှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သောကမ္ဘာကြီးတွင်ဤလောက၌ကျွန်ုပ်မတည်ရှိပါ။
ပုံရိပ်သည်မြင်ကွင်းနှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းအတွက်သာမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းကိုမထိနိုင်ပါ။ ၁၀၀% မမြင်နိုင်ပါ။ တုံ့ပြန်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူမှုရေးဆိုင်ရာပုံများမဟုတ်ပါ။
mariangel fumero ဟုသူကပြောသည်
ငါထင်တာကတော့ဖေ့စ်ဘွတ်ကသိပ်ကောင်းတဲ့လူမှုရေးကွန်ယက်မဟုတ်ဘူး၊ ငါဆက်နွှယ်နေတုန်းပဲ၊ သူတို့ကမင်းရဲ့ဓာတ်ပုံကိုမြင်နေရတယ်၊ မှတ်ချက်ပေးတယ်၊
mariangel fumero အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်၏ Facebook mo အတွက်အလွန်ကောင်းသောလူမှုကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အသက် ၈ နှစ်အရွယ်သူ၏ဝမ်းကွဲသည်အခြားအရာများနှင့်အခြားတစ်နေ့တွင်အခြားသူများအတွက်နည်းသွားသည်။ ထူးဆန်းသောလူများနှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာသက်ကြီးရွယ်အိုကောင်လေးတို့၏မှတ်ချက်စကားများကသူ့ကိုများစွာစာရေးခဲ့သည်။ ဘုရားသခင့ဘယ်လိုမျိုးလဲ၊ လူမှုရေးကွန်ရက်အတွက်သာမကအခြားသူများအတွက်ပါပြန်ပေးဆွဲခြင်းနှင့်ခိုးယူမှုများကိုမမေ့နိုင်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေမကောင်းတဲ့စကားလုံးတွေ (စာလုံးပေါင်းအမှားတွေဒါမှမဟုတ်အမှားအယွင်းတွေ) ရေးသားလေ့ရှိတယ်။
သငျသညျလူသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်နိုင်သောကြောင့်ငါ faceboook ကိုချစ်၏
ကျနော့်အမြင်မှာတော့မင်းတစ်ယောက်ချင်းစီက သင်လုံးဝမှန်ပါသည်၊ ငါသဘောတူသည်
တစ်စုံတစ် ဦး က 'Restrict Data' သည်အရေးကြီးကြောင်းပြောပြီးအခြားသူက“ သူတကယ်ပြောနေတာကိုမသိဘူး” ဟုပြောခဲ့သည်။ သို့သော်သူ့ကိုငါမသိလျှင်သူသည်ကျွန်ုပ်၏အဆက်အသွယ်များကြားအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်မည်နည်း။
အခြားသူတစ် ဦး က“ မင်းတို့ရဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုမင်းမြင်တယ်၊ မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝထဲကို ၀ င်ရောက်လာတယ်” စသည်တို့ပြောခဲ့သည်။ သင်လွှင့်တင်လိုက်သောသင်၏ဓာတ်ပုံများကိုသင်မြင်ချင်သည်။ ငါတွေ့မြင်တာကဒီနေရာမှာရေးတဲ့ငါတို့အများစုဟာငါတို့လူငယ်တွေပဲ၊ ငါတို့မှာညီလေးလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုကူညီနိုင်တယ်၊ သူတို့ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နဲ့သူငယ်ချင်းတွေလည်းမသိဘူး။
ဤသည် flavia rosalinda များအတွက်မှတ်ချက်ဖြစ်ပါသည်:
ဖေ့စ်ဘွတ်ကအရမ်းကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်သင်ဘယ်လိုမှတ်ပုံတင်ရမလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်၊ တကယ်တမ်းမှတ်ချက်ဖြစ်မှာပါ၊ ဘယ်လိုကြားလဲ၊ သင်ဟာ ၁၀၀% မှာသင်လိုအပ်နေတယ်သိပ္ပံပညာကသိပ္ပံပညာမဟုတ်ပေမယ့်သိပ္ပံပညာနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အရာများ။ ; ubikt nerd !!!!
nnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrddddddddddddddddddddddddddssssssssssssssssssssssssssss လိုက်ဖက် !!!!!!!!!!!!!!!
ငါ့အတွက် - လူတိုင်းတွင်အားနည်းချက်များနှင့်အမှားအယွင်းများရှိကြသည်၊ သို့သော်သင်ကထိုကလေးမအားသင်ကြားခြင်းနှင့်ခေါ်ခြင်းမပြုရန်သင်လူမိုက်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ငါ့မျက်နှာကိုငါချစ်တယ်။ အဲဒါအကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကသူငယ်ချင်းတွေနဲ့မျှဝေလို့ရပေမယ့်မင်းကဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်😛
ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အတွက်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုထိန်းချုပ်ထားပါကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ပရိုဖိုင်းတွင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ထိန်းချုပ်မှုကိုသင်ထားနိုင်သည်။ သင်၏သူငယ်ချင်းများ (သင်ဖြည့်ထားသော) များမှသာသင်မိတ်ဆွေများကိုဖျက်နိုင်ပြီးသင်သိသူများကိုသာပိုင်ဆိုင်နိုင်သည်။ ။ ahii qe ကသူတို့ရဲ့မိုက်မဲမှုတွေ၊ ကျောင်းနေဖို့နေရာတွေစသဖြင့်အရာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားမယ်ဆိုရင် .. အခုလုံခြုံမှုကိုထိန်းချုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အန္တရာယ်ရှိဖို့အရမ်းလွယ်ကူပါတယ် ..
juan camilo martines ဟုသူကပြောသည်
သူကရင့်ကျက်တဲ့သူကိုကူးယူဖို့လိုတယ်၊ သူတို့အရမ်းကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့က facebbok အကြောင်းကောင်းကောင်းပြောဖို့လိုတယ်။
juan camilo martines သို့စာပြန်ပါ
သူတို့မျက်နှာသည်လက်သည်းလှသည်၊ မျက်နှာရှိသူသာ၎င်းကိုသာအသုံးပြုရမည်ကိုသူတို့သိကြသည်။ ……… and c kuekn x idiots
အဲဒါ pritty ပါပဲ
မျက်နှာစာ AVEEER UFF
အိုင်တီအကောင်းဆုံး RRRRRRRRRRRR ပါပဲ
သငျသညျ KIER မထားဘူးဆိုရင်
KE KOMENTE ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်သူတို့မြင်လိမ့်မည်၊ သင်ပြောသည့် KOMO သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးသို့ရောက်လိမ့်မည်။
အဲလ်လာ AVEER တွင် KUENTA လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်သည် Facebook ၏အားနည်းချက်ကိုမဖတ်ရသေးပါ၊ သူတို့ပြောသမျှကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုမှန်ကန်သောအားနည်းချက်ကိုရှာဖွေနေသည်။
eeesss အလွန်ကောင်းသော ell faceee … aunkkeee … ..ay k tner kuído…သို့သော်သူငယ်ချင်းများနှင့်စကားပြောရန် bkn ဖြစ်သည်… ..
Delia marquez ဟုသူကပြောသည်
ဖေ့စ်ဘွတ်ကကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးအရာဖြစ်တယ်။ ငါစွဲလမ်းနေတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာငါသိကတည်းကဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူး
Delia Marquez ကိုပြန်ကြားပါ
ငါထင်တာကတော့သူတို့ဟာသာမန်လူတွေလို့ထင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေကိုသင့်ရဲ့ Facebook ကိုလူတွေကိုမမြင်စေချင်ဘူးဆိုရင်၊ ဒါကိုသူကမြင်နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒါကကမ်းလှမ်းတဲ့ကိရိယာတစ်ခုရှိတယ်။ သင်ယူပါ သင်မသိသောသို့မဟုတ်သင့်အတွက်မကျသည့်မည်သည့်ဆက်သွယ်မှုကိုမဆိုလိုချင်ပါက၎င်းကိုဖျက်ပစ်ပါ။ ၎င်းသည်ဤအချက်အချာ၏ဟောပြောချက်ရှိပြီး၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သောအရာများကိုပင်သင်မသိပါ!
လူမှုကွန်ယက်များအားလုံးသည်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမရှိသောသူများ၊ အထူးသဖြင့်လူငယ်များအတွက်ဖြစ်သည်။ ဤလူများသည်တကယ့်ဘဝထက်စာရိတ္တနှင့်မှားယွင်းသောဘဝကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြပြီးလှည့်စားတတ်ကြသည်။ ဒီမှာသော့ချက်စကားလုံးကရင့်ကျက်မှုပါ။ ကံမကောင်းတာကသူတို့မှာနည်းနည်းပဲရှိတယ်။
အက်စ် Crush ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ ငါသည်အထက်ပါအများစုနှင့်သဘောတူသည်။ vdd esk ကျွန်ုပ်တွင်မျက်နှာရှိသည်။ ၎င်းသည်မကောင်းပါက၎င်းကိုပိတ်ရန်စဉ်းစားနေသည်။ Aunk သည်အန္တရာယ်များကိုသိသည်။
အကြံဥာဏ်အနည်းငယ်ယူပါ - လူတစ် ဦး စီ၏တာ ၀ န်ကိုရည်ရွယ်သည်။
S. Crush သို့ပြန်သွားပါ
အဲလက်စ်Avendaño (pachuca hgo) ငါကထိပ်တန်းပရိသတ်တစ်ယောက်ပါ ဟုသူကပြောသည်
ငါအတွက်ကတော့ facebook ကိုသင်ဘယ်လိုထိန်းချုပ်ရမယ်ဆိုတာသိပေမယ့်အားနည်းချက်တွေကိုရှာနေသရွေ့ကောင်းတယ်။ ငါ့ကျောင်းမှာအငြင်းအခုန်တွေရှိနေတယ်၊
အဲလက်စ်Avendaño (pachuca hgo) အားပြန်ပြောပါကျွန်ုပ်သည်အလွန်အောင်မြင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးသူတစ်ယောက်ပါ
စျေးကြီးတဲ့သမီးလေး !!! ဟုသူကပြောသည်
PZ ငါ KE ထင်ပါတယ်တကယ်ပဲမှန်တယ်ဆိုရင် KOMO ကသင့်ကိုကောင်းတယ်လို့ခံစားရစေတယ်။ ငါ ADMICT FACEBOOK ဖြစ်ပြီးဒီလူမှုရေးကွန်ယက်ကို MEGA ကိုချစ်တယ် !!!! ဒါဟာအမြင့်ဆုံး KE FUNNY !!!!! AY ကျွန်ုပ်လေ့လာနေသောငွေစာရင်းများအဆုံးသတ်ပါကအကြောင်းအရာများနှင့်ကျောင်းများအကြောင်းဂရုမစိုက်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သာအမေရိကန်နှင့် ၈ နှစ် ၉ နှစ်သာပေးသည်၊ သို့မဟုတ်အချို့သည်ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည် !!!! ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးရှိသောအချိန်ကိုကောင်းစွာ FUN X ဥပမာဥပမာတွင်အသုံးပြုခြင်းက ပို၍ ကောင်းသည်။ » FACEBOOK » !!!!
ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာကို XKE SCREAMS ရှည်လျားသည်ကိုကျွန်ုပ်မမြင်နိူင်ပါ။
NENITA PRECIOSA သို့ပြန်ပြောပါ !!!
ငါ Facebook ကိုကြိုက်တယ် 😀
ဖေ့စ်ဘွတ်ကအရမ်းကောင်းတယ်။ ဟုတ်တယ်၊ အထီးကျန်တယ်လို့ခံစားနေရတဲ့လူတွေပဲ။ သူတို့လေပြေကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမယ်မသိဘူး !!
အဘယ်သူမျှမ Facebook ကိုမှပြန်ကြားချက်
ကောင်းပြီ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ကမကောင်းဘူး၊ မကောင်းဘူး၊ အဲဒါကိုဘယ်လိုအသုံးပြုသင့်တယ်ဆိုတာဥပမာ၊ ငါ့ရပ်ကွက်ကသိတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ၊ ငါ့ပညာရေးစင်တာကနေငါသာအဲဒီမှာရောက်နေတယ်။ ဒီ site ကလူတွေကိုသင်ပေးတယ်။ မင်းမြို့ထဲမှာနေပေမယ့်ငါသူတို့ကိုဘယ်တော့မှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး၊ တစ်ခါတလေမင်းကိုတောင်းဆိုနေတဲ့စူပါချစ်စရာကောင်မလေးတွေရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ငါသူတို့ကိုမသိဘူး၊ ငါမပြောဘူး။ ငါ့အတွက်လုံခြုံမှုကတန်တယ်။ ရေရှည်တွင်မိန်းကလေးသည်ပြန်ပေးဆွဲသူမဟုတ်၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းချုပ်နိုင်သည်၊ သူမသိသောသူကိုလက်ခံခြင်းမပြုမီဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် ဦး စွာစဉ်းစားသည်။ နုတ်ဆက်ပါတယ်ဂရုစိုက်ပါ။
bno amii facebook သည်မကောင်းသောပုံမပေါ်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏အခြေအနေ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ လင့်များစသည်တို့ကိုမှတ်ချက်ပေးသည့်သူစိမ်းများကဲ့သို့သောချို့ယွင်းချက်များရှိမှသာသူစိမ်းများကသင်၏ဓာတ်ပုံများကိုမှတ်ချက်ပေးရန်အခြားသူများကို esqe ကြိုက်သူများအားကျွန်ုပ်မနှစ်သက်ကြောင်းမှတ်ချက်ပေးသည်။ aceotas သင်၏အရာကြည့်ရှုပါ။
ငါနှင့်ပတ်သက်သောငါသိသမျှသူငယ်ချင်းများသာရှိသေးသည်။ သူ့ကိုယ်သူမည်သည့် giganton eeeh မှမကျေမနပ်ဖြစ်အောင် Aya နှင့်မိုက်မဲသောကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၌ရှိသောသူငယ်ချင်းများသာရှိသည်။ သို့သော်လူတို့သည်အလွန်မိုက်မဲသောကြောင့်အမြဲတမ်းလှပသောမျက်နှာဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားခံရနိုင်သော်လည်းသူတို့သည် လူမိုက်များ၊ ထိုရုပ်ပုံများကို goegle မှဒေါင်းလုပ်ချသည်။ ထို့ကြောင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်မိုက်မဲမှုကိုရပ်တန့်ရန်
jhon el guapeton အားပြန်ပြောပါ
haha ဘယ်လိုဒီအရာတွေကိုဆွေးနွေးမလဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မျက်နှာကမကောင်းဘူးဆိုတာသိသာထင်ရှားနေလို့ပဲ။ ငါအဲဒါကို activated လုပ်တယ်။ ps အဲဒါကိုစွဲလမ်းစေတဲ့လူတွေဟာသူတို့မှာသူငယ်ချင်းတွေရှိတယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုမိုက်မဲတယ်လို့ငါထင်တယ်။ ဒါကို Amostad လို့ခေါ်တယ်ဆိုတာမသိရပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကမှားယွင်းတဲ့မျက်နှာကိုလည်းဖန်တီးပေးတယ်။ သူနဲ့ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းတွေအများကြီးလှည့်စားမိတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ဟာသူတို့ဟာချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုရှိသူတွေ၊ သူတို့ဟာချစ်သူစုံတွဲတွေနဲ့ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုရှိတာကြောင့်သေပြီဆိုတာကိုငါသိတယ်။ ငါတို့နေတဲ့ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်မှန်ကိုနားလည်နိုင်သလား ?? ငါဆိုလိုတာကဘယ်လိုကူညီမလဲ နောက်တစ်ခုကတော့မင်းကမလိုလားဘူး၊ မလိုလားဘူးလို့မပြောပါနဲ့။ သူတို့ကသူငယ်ချင်းတွေလို့ထင်ပြီးသူတို့ကအမြင်အာရုံသတ္တဝါတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကွန်ယက်တစ်ခုတည်းကသာသိတယ်။ Kisas nunka ကမင်းသိလိမ့်မယ်။ ငါမှာသူငယ်ချင်းတွေရှိတယ် တကယ့်ဘ ၀ နှင့်သူတို့အတွက်ပိုကောင်းသည်မှာကျွန်ုပ်သည်အချိန်သိပ်မဖြုန်းပါ၊
သာမန်အသိ - မှ - လိုအပ်ပါကဝေးလံသောဆွေမျိုးများနှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်အသုံးဝင်သည်
မိသားစု ၀ င်တွေဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာမင်းသိတယ်။ သူတို့ဘယ်လိုဆက်ဆံတယ်၊ လူငယ်တချို့ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသင်ရတယ်။
ARASHI မှအဲရစ်ပရိသတ်များ # 1 !!! ဟုသူကပြောသည်
ငါ Facebook ရဲ့အားနည်းချက်တွေကဘာလဲဆိုတာခဏလောက်ရှာဖွေနေတယ်၊ ​​အခုငါသိပြီ! ^^
သူတို့ရဲ့မှတ်ချက်တွေရေးတဲ့သူတိုင်းကိုငါအရမ်းကြိုက်တယ်၊ ငါအရမ်းကြိုက်တယ်! ယခုတွင်ငါသည်ဖွင့်လှစ်ထားသောအကောင့်နှင့်အတူပိုပြီးသတိထားပါလိမ့်မယ်, ငါ့အရေးကြီးသောအချက်အလက်အားလုံးကိုဖုံးကွယ်လိမ့်မည် !!!!!!! သူသူ !!!
ARASHI ၏ Erick Fans # 1 သို့ပြန်ပြောပါ !!!
ငါထင်တယ် Facebook ဟာမကောင်းဘူး၊ ဆန့်ကျင်ဖက်ကတော့အရမ်းကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်သင်ဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်၊ ငါတို့ထုတ်ဝေတော့မယ့်အရာတွေကိုသိဖို့လိုတယ်၊
ဤစာမျက်နှာကို ၀ င်ရောက်သူအားလုံးအားမင်္ဂလာပါ။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သည်ပြည်နယ်အမှတ်အသားမှဖန်တီးသော progana ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်များတွင် Hartbark တက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားများသာလျှင်ဤလူမှုကွန်ယက်သို့ဝင်ရောက်နိုင်သော်လည်းအချို့သောသူများအတွက် ajhora သည်အကျိုးရှိသည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်လူတို့နှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်ကူညီသည်။ မြို့, ပြည်နယ်, ဌာန, တိုင်းပြည်တွင်မတွေ့ရှိရသောဆွေမျိုးသားချင်းများ
ဟယ်လို။ ကျွန်ုပ်သည် ၂၃ နှစ်ရှိပြီးအခြားခေတ်မှခံစားရသည်။ စင်စစ်အားဖြင့်မျက်နှာနှင့်မျက်လုံးများရှိသည့်လူများသည်၎င်းတို့သည်တကယ့်ဘဝကိုမရင်ဆိုင်နိုင်သည့်အပြင်၎င်းတို့သည်အလယ်ဗဟိုရှိသည့်ကမ္ဘာကြီး၌မြှောက်ပင့ ်၍ ဝိုင်းရံထားကြသည်ကိုနှစ်သက်ကြသည်။ မှတ်ချက်များ) တစ်ထောင်ရာခိုင်နှုန်း narcissistic ။
ယခုသင်သည်မျက်နှာပေါ်တွင်သင်၏အချိန်ကိုဖြုန်းတီးလိုလျှင် (တစ်နေ့လျှင် ၄ နာရီထက်ပိုသောလျှို့ဝှက်ချက်များကိုသုံးသောသူများအတွက်) သင်၌လုပ်စရာဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ပါက ... ကြီးကျယ်သောအဆုံး၌၊ သင့်ဘဝပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအသုံးအများဆုံးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုနိူင်သောသူများရှိသည် (ကျွန်ုပ်၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ထိုသူများက၎င်းကိုအများဆုံးရရှိသည်)
သင်မသိသူ၊ သူမမျက်နှာကိုကောင်းစွာသိသည်ဟုမယုံကြည်သောလူများကိုထပ်ဖြည့်ထည့်လိုက်သောအငယ်ဆုံးသူများအတွက်အန္တရာယ်မှာဤနည်းအားဖြင့်ပြန်ပေးဆွဲခြင်းအတွက်လိုအပ်သောအချက်အလက်များကိုယူဆောင်လာသည့်သို့မဟုတ်သင်ဝါကြွားရန်ပစ်မှတ်ဖြစ်လာသည့်ရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်သူများရှိသည်။ သင်၏မိတ်ဆွေများကိုလက်ခံရုံသာမက၎င်းတို့သည်နောက်ဆုံးပေါ်အဆင့်မရောက်သည်ကိုသိရန်နှင့်သင်ထင်မြင်သည့်အတုပရိုဖိုင်းကိုအတူတကွစုစည်းထားရန်သာဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ပေါ်လာရသနည်း။ သင်သည်နုပျိုသောပုံ ဖြစ်၍ သင်၏သူငယ်ချင်းများသည်သင်၏ထင်မြင်ချက်တွင်ရေးရန်အလွန်ကွဲပြားခြားနားပါကသင့်အားခေါ်ဆိုသည့်အချိန်ကိုအဘယ်ကြောင့်ဖြုန်းတီးကြလိမ့်မည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တွင်အိပ်မက်မက်ပြီးမိနစ် ၂၀ အတွင်းမှတ်ချက် ၂၀ နှင့်ကျွန်ုပ်၏ဒုတိယလက်များကကြိုက်ခဲ့သည်။ ရှင်းနေသည်မှာထင်ရှားသောနိဂုံးဖြစ်သည်။ သင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုပြောပါ၊ သင်မည်သူဖြစ်ကြောင်းကိုပြောပြပါ။ သင်ဤကိစ္စတွင်ပင်လျှင် - သင်မည်သူထည့်သွင်းသည်ကိုပြောပြပါ။ မင်းရဲ့ပရိုဖိုင်းပုံဟာဘယ်လိုလဲ၊ ငါမင်းကိုငှားမယ်ဆိုရင်မင်းကိုငါပြောမယ်
အကယ်၍ သင်လိုချင်လျှင်သင်၏စာပေများကိုသင်ပိတ်နိုင်သည်၊ အကယ်၍ သင်လိုချင်လျှင်သင်တို့၏စာပေများကို XD နှင့်ဓာတ်ပုံများသိမ်းဆည်းရန်အသုံးမကျသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤမှတ်ချက်သည်ဖေဖေစတော်ဘယ်ရီ hdp ရှိမိန်းကလေးအားလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။ သင်“ Facebook” ကိုသင်ကြိုက်သည့်အရာသည်သင်၏ဘဝတွင်ပျက်ဆီးမှုကိုဖြည့်ဆည်းရန်ဖန်တီးထားသောဖန်တီးမှုဆိုင်ရာထင်ယောင်ထင်မှားမျှမဟုတ်ပါ။ သင် Facebook ကိုအလေးမထားပါ။ သူတို့ porkeria မရှိတော့သူတို့ကတကယ့်အရာကိုအသက်ရှင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာ virtual time ကိုဖြုန်းတီးနေတယ်
၎င်းသည် "ဖက်ရှင်" ဟုခေါ်သည့်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် (လူအားလုံးမိမိကိုယ်ကိုမစဉ်းစားနိုင်၊ လိုက်လျှောက်နိုင်သည့်အရာများ)
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည် Facebook ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်အတွက်လုံလောက်သည်ဟုထင်ရပါသည်။ ဒီစာမျက်နှာကြောင့်ကမ္ဘာကြီးဟာအများကြီးပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်။ လူတွေဟာအပေါ်ယံရောက်သွားတယ်၊ ကားတွေဓါတ်ပုံတွေတင်တယ်၊ ခရီးသွားရတာ၊ ပျော်စရာကောင်းတယ်၊ ဓာတ်ပုံနဲ့ဆိုင်တယ်။ ပြီးတော့သူတို့ဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့ဘ ၀ ပုံရိပ်ကိုပြချင်ကြတယ်။ အဲဒီအစားအခြားသူများရဲ့ ... သူတို့ပလပ်စတစ်ခွဲစိတ်ကုသမှုတွေလုပ်တယ်၊ ဆိုလိုတာကရှုပ်ထွေးတယ်။ Facebook မှာသူငယ်ချင်းကောင်းတွေပျောက်ဆုံးသွားပြီ၊ သတင်းစကားတွေကမိုက်မဲနေတယ်၊ ​​အဲဒါကလူသားတွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့အရာ၊ ဒီစာမျက်နှာတည်ရှိမှုမရှိသဖြင့်ကမ္ဘာကြီးသည်ပိုကောင်းလာခဲ့သည် ။, INFIDELITY သည် INSTID မရှိသလောက်နည်းသည်၊ VANITY နည်းသည်၊ လူအများနှင့်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများအကြောင်းကိုသိထားရပြီး၎င်းသည်ပိုမိုသိရှိရန်မလိုအပ်ပါ။
ဒါကြောင့်ဒီဟာကိုပိတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်၊ ငါကတကယ့်ဘဝကိုလိုချင်တယ်၊ အပြင်ထွက်ချင်တယ်၊ တကယ့်လူတွေနဲ့စကားပြောတယ်၊ အသက်ရှင်တယ်။ သူတို့အကြောင်းနည်းနည်းလေးသိပြီးအသွင်အပြင်ကိုစိတ်မပူပါနဲ့။
Faviolita အတွက်အလှဆုံး - CitásaSantiago 4:4။ ဘယ်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောအနတ္တဖြစ်ပါတယ်။ လောကနှင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့သောသူသည်မိမိကိုယ်ကိုဘုရားသခင်၏ရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်မောက်မာ။
ဘုရားသခင့်မိတ်ဆွေဖြစ်သူသည်ဉာဏ်ပညာ၊ ယဉ်ကျေးမှုများ၊ တန်းတူညီမျှမှုနှင့်သဘာဝတရား၏ရန်သူဖြစ်သည်။
အန်ဒီ Cvz ဟုသူကပြောသည်
အကယ်၍ မျက်နှာသည်လူမှုကွန်ယက်အားလုံး၏အကောင်းဆုံးဖြစ်လျှင် twitter၊ msn နှင့်အခြားမည်သည့်ကွန်ယက်မျှမဆို xfavor ရှိပါသည်။ သူတို့ဒီမှာပြောသောအားနည်းချက်များကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး FB ကိုအမှန်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကတကယ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့နိုင်တယ်။
Andy Cvz အားပြန်ပြောပါ
ဘုရားသခင့်အတွက်၊ ဒရာမာကိုရပ်တန့်ပါ၊ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလက်မထပ်လိုပါကမျက်နှာသည်ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဖုံးကွယ်ထားရုံမျှမကပြproblemsနာများစွာကိုကျွန်ုပ်မတွေ့တော့ပါ၊ မျက်နှာသည်ဆိုးသော်လည်းတစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဒါကောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုငါသိပ်မမြင်ဘူးသူတို့ daaaaaaaaaa ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသာဖုံးကွယ်သည် daaaaa daaaaa
ဘုရားသခင့်အတွက်၊ ဒရာမာကိုရပ်တန့်ပါ၊ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလက်မထပ်လိုပါကမျက်နှာသည်ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဖုံးကွယ်ထားရုံမျှမကပြproblemsနာများစွာကိုကျွန်ုပ်မတွေ့တော့ပါ၊ မျက်နှာသည်ဆိုးသော်လည်းတစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဒါကောင်းတယ်၊ ဒါငါမကောင်းတာအများကြီးမတွေ့ရဘူး daaaaa သူတို့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကိုဖုံးကွယ်ထားတယ် daaaaaaaaaa သူတို့ XD ဘယ်လိုထင်လဲ
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စရပ်သည်လွယ်ကူသည်၊ သင်၏ဓာတ်ပုံကိုအချို့သောလူများကလူအများမမြင်စေရန်၊ အနည်းဆုံးဖြစ်သည်၊ သူစိမ်းများကိုလက်မခံပါ၊ အကယ်၍ သင်သည်သူငယ်ချင်း၏တောင်းဆိုမှုအားလုံးကိုလက်ခံပါကလက်ခံသည် (ကောင်းပြီ၊ အဘယျသို့သောလူမိုက်?)
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရဲ့မကောင်းတဲ့၊ မကောင်းတဲ့အရာကအချိန်ယူရတာ၊ မင်းရဲ့အချိန်ကိုဘယ်လိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာလဲ။ ဓာတ်ပုံများကြည့်ခြင်း၊ စကားပြောခြင်းနှင့်အတင်းအဖျင်းများအကြောင်းလေ့လာခြင်း ... အကယ်၍ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါက၊ သင်၏ဘဝတွင်အခြားအရေးကြီးသောအရာများရှိပါက၊ သင်မလုပ်နိုင်လျှင် Facebook အသုံးပြုခြင်းကိုကန့်သတ်နိုင်သည်။ သင်၏အကောင့်ကိုပိတ်ထားပါ။
Ami ကငါ့ထက်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေအများကြီးယူပြီးမင်းရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်ဆိုရင်လူမှုရေးကွန်ရက်တွေကိုအသုံးပြုဖို့သိပ်မသင့်တော်ဘူး။ အဲ့ဒီကနေ ETC အတွက်ဖောက်ပြန်မှုအတွက်နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။
သူကငါ့ကို mara osea နဲ့စကားပြောဖို့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြောတယ်။ ရယ်စရာကောင်းတယ်မျက်နှာမမာလာကာကမကောင်းဘူးလို့မထင်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရမ်းကောင်းတယ်။ အရမ်းအေးတယ်။ ဘာမှမရှိဘူး။
ဖေ့စ်ဘွတ်ကကျနော့်ကိုတစ်ချက်၊ နောက်တစ်ခုက x ကိုဆိုလိုတာကမင်းကမင်းကိုအရှက်မခွဲချင်ဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်မင်းဒါကိုအကြိမ်ကြိမ်စဉ်းစားချင်ရင် :) :) :) :) :) :) :)
ဂျောရီ enrique ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ သူတို့ပြောတာအားလုံးဟာအားလုံးမဟုတ်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့လူမှုကွန်ယက်တွေပေါ်မှာကွန်ရက်ပေါ်မှကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာတတ်တဲ့အချိန်တွေရှိတတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့တခြားသူတွေကိုပြောတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မနာလိုမှုတွေကလူတိုင်းအတွက်အန္တရာယ်ရှိတယ်၊
jorje enrique အားပြန်ပြောပါ
ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းနှင့်အတူ tab ကိုပုံတူပွား
Google Chrome ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းများ